ब्रो, हाउ क्यान आई हेल्प यु ?- फिचर - कान्तिपुर समाचार
ब्रो, हाउ क्यान आई हेल्प यु ?
करिअर फगत जागिर होइन । पैसा कमाउने बाटो मात्र होइन । हामीले जीवनभरि गर्नका लागि रोजेको बाटोले पैसा दिनुपर्छ नै, त्योभन्दा बेसी सन्तुष्टि दिनुपर्छ । सन्तुष्टि केले दिन्छ भन्नेमा आजका तन्नेरी अलमल्लिएका छन् ।
२६ औं वार्षिकोत्सव विशेष : तन्नेरी
फाल्गुन ७, २०७५ दुर्गा कार्की
छेउको सिरकले किन नपट्याएकी, फेरि पल्टने विचार छ कि भन्ने पाराले मलाई हेरिरहेको थियो । हठात् दिमागमा आयो, नेपाली तन्नेरीको पहिलो गुण वा चरित्र हो– अल्छीपन । हाम्रो प्रिय वाक्य हो, ‘ह्या... झ्याउ लाग्यो १’ राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ ले युवालाई १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति भनेर परिभाषित गरेको छ । युथ भिजन २०१५ ले १६ देखि २४ र २५ देखि ४० गरी यिनै युवालाई पनि दुई समूहमा वर्गीकरण गरेको रहेछ । मचाहिँ तन्नेरी पुस्तालाई उमेरका आधारमा कसरी वर्गीकरण गर्ने भनेर अल्झेँ । लेख्दै जाँदा लाग्यो, उमेरका आधारमा तन्नेरीलाई वर्गीकरण गर्दा लेख र तन्नेरी दुवैलाई अन्याय हुन्छ । यो लेखमा आफूलाई भेट्टाउने सबै तन्नेरी १
नयाँ संविधान बन्यो, उत्सव मनाइयो, किन मनाइयो ? थाहा छैन । तराईको ठूलो समुदायले संविधानलाई कालो झन्डा देखायो, संविधानको किताब जलायो, किन जलायो ? थाहा छैन । गाविसको ठाउँमा गाउँपालिका आयो तर किन आयो, थाहा छैन । फेसबुक र इन्स्टाग्राममा मिम बनाउने एउटा जमातले लाइक र सेयर बटुल्न रमाइलो बनाउने नाउँमा तथ्यलाई तोडमरोड गरेर सम्प्रेषण गरेको सूचनाका आधारमा तन्नेरी पुस्ताले समाचारको तिर्खा मेटिरहेको छ । त्यसकै आधारमा अत्यन्त संवेदनशील विषयप्रति धारणा पनि बनाइरहेको छ । र, त्यसकै आधारमा भनिरहेको छ (भाषाका लागि माफी चाहन्छु तर यो हाम्रो विचार र व्यवहारको सबैभन्दा नरम अभिव्यक्ति हो भन्ने पाठकलाई थाहै छ) –
यस्तो मु... देशमा नि कोही बस्छ?
यही भीडमा एउटा त्यस्तो तन्नेरी दस्ता पनि छ, जो अनमोल केसीको डाइहार्ड फ्यान बन्छ तर सुनील पोखरेललाई चिन्दैन । ‘छक्का पन्जा’ हेरेर रुन्छ अनि ‘गोपी’ लाई कृषि कार्यक्रम भनेर उडाउँछ । सार्वजनिक यातायातमा ठूल्ठूलो स्वरमा व्यक्तिगत कुरा गरेर गललल्ल हाँस्छ र वरपरका मान्छेले अनौठोसित हेरे ‘हाम्लाई बाल ?’ एटिच्युड दिन्छ । जेब्रा क्रसिङमा गाडी नरोके ड्राइभरलाई माझीऔँलो देखाएरहिँड्छ । उहिलेकाहरूसित ईख हुन्थ्यो, अहिलेकाहरूसित एटिच्युड छ । तन्नेरी पुस्ताको एउटा जमात सेक्सका मामलामा उदार हुनुलाई प्रगतिशील हुनु भन्ठान्छ । अर्को सिंगै जमातका लागि अझै यो ‘बिजेती कुरो’ हो । गर्लफ्रेन्ड वा ब्वाईफ्रेन्ड नहुनु लाजको विषयजस्तै मानिन थालेको छ । ‘तेरो छम्मा छँदै छैन ?’ भ्यालेन्टाइन डेको अघिल्लो दिन मेरै अघि हिँडिरहेका दुई तन्नेरीहरूले एकअर्कालाई सोधेको प्रश्न । मन पराउनुस् वा नपराउनुस्, यी हाम्रो तन्नेरी पुस्ताका प्रतिनिधि झलकहरू हुन् ।
तन्नेरीको अर्को समस्या के हो भने उनीहरूको पेटभित्र आगो छैन । आगो केले जन्माउँछ ? दु:खले, पीडाले, संघर्षले । दु:ख आफैँले गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अर्काले गरेको दु:ख देख्न सक्ने आँखा र महसुस गर्न सक्ने मुटु हुनुपर्छ । हाम्रो पुस्ताले खाली गुनासो मात्र गर्न जानेको छ, आफूले पाएका कुराप्रति धन्य हुन जानेको छैन । आजको पुस्ता अधिकारका कुरा निकै कड्किएर गर्छ । अधिकार र कर्तव्य एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् भनेर केटाकेटीदेखि रटेको भनाइ भने बिर्सन्छ । हिजो हाम्रा बाबुआमाले चामलको भात खाने रहर पूरा गर्न दु:ख गर्थे । आज हामीले गर्ने दु:खका स्वरूप बदलिएका छन् तर हामीलाई हाम्रा अग्रजको दु:ख दन्त्यकथाजस्तो पनि लाग्न हुन्न । आजका हामी तन्नेरीसँग सुन्ने र गुन्ने क्षमता कम छ । हामीलाई अत्यन्त चाँडो रिस उठ्छ, हठात् प्रतिक्रिया जनाउनमा हामी माहिर हुँदै गएका छौँ ।
यी सबै खाले तन्नेरीमा राज्यको लगानी खोइ ? जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्सा (कुल जनसंख्याको लगभग २०.८ प्रतिशत, १६ देखि २४ उमेर समूह) को वृद्धिविकासमा राज्यको चासो र चिन्ता खोइ ? हाम्रो दिमागी आयतन बढाउन खुराक खोइ ? हाम्रो जोस, जाँगर, मिहिनेत र स्मार्टनेसलाई परिचालन गर्ने संयन्त्र खोइ ? यिनको उपयोग गर्नु पर्दैन ? २०६६ मै बनेको नीतिलाई ०७२ मा सम्पादन मात्र गरेजस्तो लाग्ने युवा नीति र त्यसकै आधारमा बनेकोयुथ भिजन २०२५ भाषागत क्लिष्टताबाट उम्केर कहिले ‘फिल्ड’ मा आइपुग्ने हो ? जापानमा आफूले गरेको मिहिनेतलाई कलेज टप्न सक्ने लेभलको भनेर स्वमूल्यांकन गर्ने मेरी साथी नेपाल फर्केर कलेज जानेबाहेक केही काम नगर्दा पनि बल्लतल्ल पास हुनुमा उसको मात्र कमजोरी हो र ? नेपाल फर्कनासाथ ऊ किन एकाएक अल्छी भई ? उसलाई अल्छी नबनाउन राज्यले केकस्ता प्रयास गरेको छ ? उसलाई बाबुआमाप्रति निर्भर नबनाईकनै उसको पकेट खर्च बन्दोबस्त गर्न राज्यले के इलम व्यवस्था गरेको छ ?
आजको तन्नेरी पुस्ताको ठूलो हिस्सा अभिभावकविहीन छ । उनीहरूलाई सही बाटो देखाइदिने मान्छे चाहिएको छ तर त्यो को हो भन्ने दोधारमा छन् । पढाइ र रोजगारका लागि काठमाडौँ छिरेको ठूलो जमात परिवारबाट टाढा रहँदाको ‘स्वतन्त्रता’ को ‘आनन्द’ उठाइरहेको छ । यस्तोमा स्कुल तथा कलेज अभिभावक बन्नुपर्नेमा जिम गएर बडी बनाएको, जासुसजस्तो व्यवहार भएको हेर्दै डरलाग्दो डीआई (डिसिप्लिन इन्चार्ज) को हातमा कैँची दिएर विद्यार्थीको कपाल र पाइन्टको लम्बाइ जाँच्दै हिँडेका छन् । परिचयपत्र बिर्सिएकामा विद्यार्थीलाई गेटबाटै घर फर्काएर अपमान र हेपाहा प्रवृत्तिको व्यावहारिक पाठ पढाइरहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो अभिभावक राज्यले नै आजको तन्नेरी पुस्तालाई उपेक्षा गरेको छ । पाकाहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने जे हाम्रा कमजोर पक्ष हुन् तिनीहरू हाम्रा सबल पक्ष पनि हुन् । हैसियतभन्दा ठूलो सपना देख्न सक्ने साहस र त्यो सपना पूरा गर्न जोखिम मोल्न सक्ने आँट हाम्रो खुबी पनि हो । र, जे छ त्यसैमा चित्त नबुझाउने असन्तोषी र विद्रोही प्रवृत्तिले हामी तन्नेरीलाई अरूभन्दा फरक बनाउँछ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७५ १६:०४